🥇 ▷ Ku hel Xiaomi Mi 9T Pro 128GB qiimaha ugu hooseeya ilaa maanta ✅
Ku hel Xiaomi Mi 9T Pro 128GB qiimaha ugu hooseeya ilaa maanta
Xiaomi waa astaan ​​dhiirigelisa damacyada inta badan sii deyn kasta oo ay sameyso. Kuwii ugu dambeeyay ee aan aragnay, Xiaomi Mi 9T Pro malaha waa kuwa ugu caansan dhamaantood inay leeyihiin astaamo heer sare ah oo qiimo qaali ah laga muujinayo. Waxaan horey kuugu soo qaadanay dhamaan faahfaahinta ku saabsan garoonkaan waqtiga uu astaantiisa rasmiga ahaa, laakiin waxa aan maanta kuu nimid waa dalabyo yaa waxaad ka heli kartaa Xiaomi Mi 9T Pro 128GB qiimaha ugu hooseeya ilaa maanta. Xitaa way ka jaban tahay Mi 9T Pro 64GB.
Sirta uu tilifoonku u qiimo jaban yahay sidii aan sheegnay, ayaa ah sababta oo ah waxaan adeegsan karnaa sicir-dhimis dhan 66.21 yuuro. Koodhku waa sidan soosocda Sicir-dhimistaan, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan iibsanno Xiaomi Mi 9T Pro oo keliya 359.16 euro Waxa ugu fiicanna, waa qiyaastii 128 GB nooca kaydinta gudaha iyo 6 GB oo RAM ah, sidaa darteed kama yaraan doontid xusuusta.
Iibso Xiaomi Mi 9T Pro wax kayar 360 euro
Ku hel Xiaomi Mi 9T Pro ka raqiisan abid
Runtu waxay tahay in qiimaha dalabka uu mar hore umuuqday inuu aad ugufiican yahay nooca 64 GB, laakiin waxa ugu fiican oo dhan waa inuu yahay nooca 128 GB. Posts si aan isugu dayno, waxaan dooneynay inaan aragno haddii koodhku sidoo kale u shaqeynayay nooca ugu asaasiga ah, maxaa yeelay qiimaheeda wuxuu noqon karaa mid dhulka hoostiisa ku jira, laakiin maya, kaliya wuxuu lashaqeeyaa qaabka 128GB. Haddii aad ugu talagashay inaad iibsato taleefankan, runtii waa waqtiga ugu fiican ee la sameeyo. Haddii aadan weli aqoon isaga, wuxuu ku baxaa sifooyinka gudaha ee uu leeyahay:
shaashadda 6.39 inch AMOLED bandhigaya xalka FullHD +
Processor Qualcomm Snapdragon 855 processor-sideed sideed ah
RAM 6 ama 8 GB oo RAM ah
Kaydinta 64,128 ama 256 GB oo kaydinta gudaha ah
Kaamirooyinka gadaal Ugu weyn 48 megapixel f / 1.75
13 megapixel angle f / 2.4
8 megapixel telephoto f / 2.4
Kaameerada hore 20 megapixel camera pop-up
Durbaan 4,000 mAh batteriga oo si xawaare leh ku socda lagu dallaco illaa 27W
Isku xirnaanta 4G, Bluetooth 5.0, jaakada 3.5mm, Dual WiFi, GPS, NFC
Nidaam Android 9 Foot oo hoos timaada MIUI 10
Tilmaamo dheeri ah Jirka birta iyo galaaska, USB Type-C iyo akhristaha faraha ayaa shaashada ku jira
Waxaan wajahaynaa garoon buuxa oo dhameystiran oo aan lahayn wax aad uga maseersan taleefannada kale ee qiimaha aad u sarreeya. Haddadaan waxaan ka iibsan karnaa GeekBuying qiimo 359 euro ah nooca 128 GB (gudaha Amazon waa 449 euro), marka keydka qiimaha rasmiga ahi waa ku dhawaad ​​100 euro. Xusuusnow haddii aad rabto inaad ku iibsato sicirkaas, waa inaad isticmaashaa sicir-dhimista kahor intaadan lacagta bixin: 3NET22. Kani waa nooca caalamiga ah ee leh “Global ROM”, sidaa daraadeed waxaa laga saari doonaa sanduuqa waana lagu raaxeysanayaa, sidoo kale wuxuu leeyahay dammaanad ah dukaan muhiim ah sida Geekbuying.
Iibso Xiaomi Mi 9T Pro oo ah 359 euro oo leh sicir-dhimista 3NETM2T